Wararkii ugu dambeeyay Suuqa kala iibsiga Ciyaartoyda Wargeysyadda Waxa Ay Ka Qoreen -
HomeciyaarahaWararkii ugu dambeeyay Suuqa kala iibsiga Ciyaartoyda Wargeysyadda Waxa Ay Ka Qoreen
Wararkii ugu dambeeyay Suuqa kala iibsiga Ciyaartoyda Wargeysyadda Waxa Ay Ka Qoreen
January 20, 2018 F.G ciyaaraha 0
Macalinkii hore ee Kooxda Barcelona Luis Enrique ayaa isku diyaarinaya inuu Xagaaga xilka Chelsea ka badelo Antonio Conte, iyadoo daaficii hore ee Blues Juliano Belletti uu ka dhigan doono agaasimihiisa ciyaaraha . (Star)
Macallinka Manchester City Pep Guariola ayaa bartilmaameedka koowaad u ah Kooxda PSG. (Mirror)
Kooxda Tottenham ayaa filaneysa inay Arsenal ku garaacdo saxiixa 20-jirka qadka dhexe reer Brazil ee naadiga Bordeaux Malcom. (Telegraph)
Weli heshiis ma dhicin, laakiin macallinka Manchester City Guardiola ayaa Man United ugu hambalyeeyay saxiixa weeraryahanka Arsenal ee Alexis Sanchez 29-jir. (Talksport)
KooxdavManchester City ayaa isaga baxday heshiiska ay Arsenal uga soo saxiixan lahayd Sanchez iyadoo ka cabsatay inuu saameyn ku yeesho xasiloonida dhaqaale ee kooxda. (Times)
Alexis Sanchez ayaa lagu soo bilaabi karaa kulanka maanta ee Crystal Palace kaddib markii uu dib ugu soo laabtay tababarka kooxda shalay iyadoo uu markii hore tababarka la qaadanayay kooxda yar yarka. (Mirror)
Balse warkale ayaa sheegaya in Sanchez uu macsalaameeyay saaxiibadiisa kooxda ka hor inta uusan xalay ka soo tagin hoteelkooda. (Express)
Tababaraha Newcastle United Rafael Benitez ayaa diidan inuu mustaqbalkiisa u hibeeyo Newcastle isagoona kooxda ka sugaya inay bishan sameeyaan saddex ilaa afar saxiix. (Guardian)
KooxdavLiverpool ayaa dar dar galineysay inay 40-milyan ugu soo dhaqaaqan goolhayaha Stoke City Jack Butland balse waxaa loo sheegay in 24-jirka uusan beec ahayn.
Javier Hernandez ayaan dib ugu soo laaban doonin Manchester United, Besiktas ayaa ku dhow heshiis 7.5-milyan oo bound ay ku soo xero galineyso dhaliyaha reer Mexico 29-jir. (Goal)
Kooxda Chelsea ayaa wada hadalo dheeri ah usbuuca soo socda la yeelan doonta kooxda Roma heshiiska ku aadan 23-jirka garabka bidix ee reer Brazil Emerson Palmieri iyo Weeraryahanka reer Bosnia Edin Dzeko 31-jir. (Telegraph)
Macallinka Manchester United Jose Mourinho ayaa joojiyay baadi goobka uu ugu jiray daafac uga ciyaara Garabka bidix kaddib markii uu badelay Maankiisa ku aadanaa Luke Shaw, 22-jir. (Mail)
Kooxda Manchester United iyo Paris St-Germain ayaa lagu wadaa inay ku dagaalamaan saxiixa xiddiga qadka dhexe reer France Lassana Diarra, 32-jir kaa ayaa beeca xorta ah ugu soo biiri kara, laacibkii hore ee Chelsea, Arsenal iyo Portsmouth ayaa bishii la soo dhaafay ka soo tagay naadiga carbeed ee Al Jazira. (Le Parisien)
Kooxda Arsenal ayaa diyaar u ah in Olivier Giroud, 31-jir ay qeyb uga dhigto heshiiska ay kula soo saxiixaneyso weeraryahanka reer Gabon ee Borussia Dortmund 28-jir. (Independent)
Kooxda Crystal Palace ayaa dalab 9.7 milyan ka gudbisay 31-jirka reer Talyaani ee weerarka kaga ciyaara Inter Milan. (Corriere dello Sport)
Kooxda Everton ayaa dooneysa saxiixa daafaca Lille Adama Soumaoro, 25-jir balse weli wax dalab ah kama gudbin. (Liverpool Echo)
Macalinka Southampton Mauricio Pellegrino ayaa sheegay inay sameeyeen wax kasta si ay isugu dayaan inay dib ula soo saxiixdaan Theo Walcott , ka hor inta uu 28-jirka ku biirin Everton.